विश्वभरिका नेपाली समुदायलाई ट्रान्सफर्म गर्ने कोसिसमा छौं - GurkhaMediaविश्वभरिका नेपाली समुदायलाई ट्रान्सफर्म गर्ने कोसिसमा छौं - GurkhaMedia
UK: 2021 September 26, Sunday नेपाल: २०७८ असोज ०९, शनिबार
विश्वभरिका नेपाली समुदायलाई ट्रान्सफर्म गर्ने कोसिसमा छौं
बेलायतमा स्वास्थ, धन र नेतृत्व विकासलगायत विषयमा आगामी जुलाई ३ र ४ तारिखमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । ‘Unleash Your Inner Self’शीर्षकमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्न लागिएको माउसटेल वेब सर्भिसेस् अल्डरसटका निर्देशक मान गुरुङले जानकारी दिए । बेलायतको स्थानीय समयअनुसार बिहान ९ देखि दिउँसो २ बजेसम्म हुने कार्यक्रममा नेपाल बेलायतलगायत संसारभरबाट सहभागी हुन पाइने निर्देशक गुरुङले बताए । उनका अनुसार सशुल्क हुन लागेको कार्यक्रमबाट बचत भएको निश्चित रकम कोभिड महामारी पीडित नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा सहयोग गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ । कार्यक्रमका विषयमा गोर्खा मिडियाका मिलन तमुले माउसटेल वेब सर्भिसेस् अल्डरसटका निर्देशक मान गुरुङसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।
जुलाई ३ र ४ तारिखमा तपाईंहरुले आयोजना गर्न लाग्नु भएको ‘Unleash Your Inner Self’ बारे जानकारी गराइदिनुहोस् न ?
Unleash Your Inner Self टाइटलमा हामीले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा कसरी ट्रान्सफर्म गर्ने, कसरी विकास गर्ने, कसरी प्रगति गराउने भन्ने सोचले डिजाइन गरिएको कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम नौलो छ । सकभर यसलाई भव्य बनाउने कोसिसमा हामी लागिरहेका छौं ।
यसअघि पनि तपाईंले धेरै कार्यक्रम गरिसक्नु भयो । यसपटक स्वास्थ्य, विजनेस, सामाजिकजस्ता विषय समेट्नु भएको रहेछ, यो प्रोग्रामबाट के लाभ हुनसक्छ ?
यसको मुख्य उदेश्य मानिसको लागि हेल्थ, वेल्थ र ह्याप्पिनेस चाहिन्छ । जुन सम्भव पनि छ । मानिसलाई एउटा शान्ति चाहियो । शान्तिका लागि कोचहरु आउँदैहुनुहुन्छ । वेल्थ डेभलपका लागि इन्भेस्ट चाहियो । बिजनेस गरोस् वा काम गर्नुस् । त्यसलाई कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने उदाहरणहरु सेयर गर्न आउँदै हुनुहुन्छ । हामीले विज्ञापनमा राखेका कोच वा व्यक्ति जति हुनुहुन्छ, त्यहाँ नदेखिनु भएका व्यक्तिहरु पनि आउनुहुन्छ । र हाम्रो नेपाली समुदायक कसरी विकास भइरहेको छ । विशेषत: नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक परिवर्तन पनि सँगसँगै आइरहेको छ । समुदायमा सोसललाई कसरी अझ प्रभावकारी बनाउने, कसरी उपलब्धि हासिल गराउने भन्नेमा हाम्रा अनुभवी लेक्चरहरु आउँदै हुनुहुन्छ । यी कुराहरु एउटा प्याकेजमा ब्लेन गरेका छौं ।
ट्रेनरहरु को को हुनुहुन्छ त ?
यसमा इन्टरनेसनल रुपमा परिचित कोच हुनुहुन्छ एनएलपी हिलर इन्द्र गुरुङ काठमाडौंबाट । पोखराबाट मिडियाकर्मी एवं एक नेतृत्व दीपेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । कम्युनिटीहरुका लागि लिडरसिप कसरी गर्ने र प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने उहाँमा राम्रो स्किल छ । उहाँका कार्यक्रममा धेरै मानिसहरु एटेन्ड भइसकेका छन् ।
त्यस्तै कफी ल्याब यूकेका फाउन्डर, इन्टरप्रिनियर Latte Art Champion for Six Consecutive Years (2013 to 2018) & Author of Coffee Art Book.बाट धन तामाङ, म्याराथन धावकसमेत रहनुभएका डा. मिलन ज्ञवाली । उहाँ विभिन्न क्षेत्रमा दक्ष हुनुहुन्छ । बेलायतमा नेपाली समुदायबाट पहिलो रिटेल इन्भेस्टर एवं ठूला होलसेलहरु सञ्‍चालक प्रोपर्टी इन्भेस्टर आशबहादुर गुरुङज्यू हुनुहुन्छ । त्यसमा मेरो पनि प्रिजेन्टेसन रहनेछ ।
कार्यक्रम कस्तो माध्यमबाट गर्दै हुनुहुन्छ ?
बेलायतमा जुन २१ तारिखमा नयाँ चेन्जेजहरु आउँदै भन्ने छ । खासमा हामी आशावादी छौं ओपन नै हुन्छ भनेर । त्यसो भयो भने अल्डरसटस्थित एम्पायर हलको तेस्रो वा चौथो तलामा गर्दैछौं । यदि सरकारले निषेधाज्ञा लगायो भने जुम भर्चुअलबाट कार्यक्रम हुन्छ । ओपन भयो भने फिजिकल र जुम जोडेर त्यसरी गर्ने योजना छ । नेपालबाट प्राय: जुमबाट नै कनेक्ट हुने हो । जो जो यूकेमा हुनुहुन्छ, उहाँहरु फिजिकल्ली आउनुहुन्छ ।
प्राय:जसो हामीमा फियर हुन्छ । अरुको स्टोरी सुनेर हामीले हामीलाई नै अन्डरमाइन्ड गर्छौं । हामीभित्र द्वन्द्व हुन्छ । त्यसलाई चिर्नका लागि हामीले सानो कुरा सिफ्ट गर्नुपर्छ । भित्र बसिरहेको भ्रम हटाउनलाई हामीले ट्रान्सफर्म गर्ने प्रुभन मेथडहरु छन् । त्यसलाई युज गर्छौं । सँगै वेल्थको विज्डमहरु सेयर गर्नेछौं । यसले नेपाली कम्युनिटीलाई एकस्टेप अगाडि बढाउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । र राम्रा राम्रा प्रोग्राम पिस एन्ड ह्याप्पिनेसदेखि लिएर वेल्थ, हेल्थमा विश्वभरि रहेका नेपाली समुदायलाई ट्रान्फर्म गर्ने कोसिसमा हामी छौं । टाइम मिल्यो भने बेलायतमात्रै होइन संसारभरिबाट जुममा ज्वाइन गर्न मिल्छ । यो कार्यक्रमबाट उठेको निश्चित रकम हामी कोभिड प्रभावित नेपालका रिमोट एरियामा कुनै संस्थामार्फत सहयोग गर्ने छौं ।